परीक्षण गर्दा कोरोनाको औषधि अमेरिकामा भेटीएपछि, उपचारका लागि उक्त औषधि स्वीकृत, अब बिरामीलाई इन्जेक्सनमार्फत दिइने ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/परीक्षण गर्दा कोरोनाको औषधि अमेरिकामा भेटीएपछि, उपचारका लागि उक्त औषधि स्वीकृत, अब बिरामीलाई इन्जेक्सनमार्फत दिइने !
परीक्षण गर्दा कोरोनाको औषधि अमेरिकामा भेटीएपछि, उपचारका लागि उक्त औषधि स्वीकृत, अब बिरामीलाई इन्जेक्सनमार्फत दिइने !
अमेरिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि ‘रेम्डिसिभियर’ नामको एन्टिभाइरल औषधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अमेरिकाकै औषधि कम्पनी ‘गिलियाड साइन्स’ले बनाएको औषधिलाई अमेरिकी सरकारले बिरामीमा प्रयाेगका लागि शुक्रबार स्वीकृति दिएको हो।
केहि दिन अघि मात्र अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले महामारीका रुपमा विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि पछिल्लो पटक प्रयोगमा ल्याइएको औ’षधि निकै प्र’भावकारी रहेको बताएका थिए । विश्वभर सं’क्रमितको संख्या बढ्दै गएको र आर्थिक वि’श्रृंख’लता नि’म्त्याए’को कोरोनाभाइरसको औ’षधिले परीक्षणका क्रममा धेरै राम्रो काम गरेपछि सर्वत्र खुशीयाली छाएको छ ।
मानिसमा गरिएकाे परीक्षण क्रममा ‘रेम्डिसिभियर’ औषधिले कोरोना भाइरस नष्ट गरेको अनुसन्धाकर्ताले दाबी गरेका छन्। यो औषधिलाई अमेरिकी केन्द्रीय सरकारको औषधि स्वीकृतिसम्बन्धी आधिकारिक निकाय द फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले आपत्‌कालीन स्वीकृतिका रूपमा अनुमति प्रदान गरेको हो। अब यो औषधि इन्जेक्सनमार्फत बिरामीलाई दिइने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। औषधिको परीक्षण निकै सफल भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसको स’कारात्मक असर वालस्ट्रिट सहित विश्वको शेयर बजारमा देखिएको छ । अमेरिकामा एक दशकयताकै सबैभन्दा ख’राब आर्थिक स्थिति देखिए पनि वा’लस्ट्रि’टमा सका’रात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
रेमडेसिभर नामको औ’षधिको क्लिनिकल परीक्षणले मानिसको निको हुने दर करिब ३० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । हालसम्म यो औ’षधि नै नयाँ कोरोनाभाइरसको उपचारमा सबैभन्दा सफल मानिएको छ । अमेरिकी इ’पि’डि’मियोलो’जिस्ट डा ए’न्थोनी फ’चीले संवाददाताहरुसँग रे’मडे’सिभर औ’षधिको प्र’भाव र असर निकै उत्साहप्रद रहेको बताए । यो औ’षधि इ’बोला भाइरसका बिरामीका लागि भने असफल देखिएको थियो ।यही औ’षधि चीनको उहानका बिरामीमा परीक्षण गर्दा पनि त्यति सफल मानिएको थिएन ।
त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्नमा चीनको असफलतालाई मध्यनजर गर्दै यसमा अमेरिकी प्रतिबन्धको सम्भावनालाई अस्विकार गर्न सकिँदैन ।’ उनले यो कुरा पत्रकारलाई त्यतिबेला जानकारी दिए जब उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि फार्महाउस क्याम्प डेविड जानका लागि हेलिकोप्टरमा बस्ने तयारीमा थिए ।उनी फार्महाउसमा विकेन्डमा काम गर्ने बताइएको छ । ट्रम्प २८ मार्चदेखि ह्वाइट हाउसबाट बाहिर निस्किएका छैनन् ।उनी यो विकेन्ड आफ्ना केही सहयोगी र छोरी इभांका ट्रम्पसँग बिताउनेछन् ।
झापामा दिनहुँ २८ जनाभन्दा बढी ज्वरो आएका र रुघा लागेका विरामी भेटिन थाले !!